အထူးသဖြင့်သူတို့အလှည့်ပတ်အပေါငျးတို့သမင်းသမီးတစ်ဦးအနည်းဆုံးအရမ်းလေးစားမိပါတယ်နှင့်တပ်မက် - ဟုတ်ပါတယ်, မိန်းမယောက်ျားသည်သေချာပင်ဖြစ်သည် ဆက်သွယ်ရေး၏ ။
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့သင့်ရဲ့ရည်းစားမနာလိုလျှင်ပြုပါသလော မလုံခြုံသောလူများ၏တွေအများကြီးအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်နည်းအလွန်အကျွံစကားရပ် - ကငြူစူသောစိတ်ဟုယုံကြည်နေသည်။ ကသေးငယ်တဲ့ပမာဏအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်တွင်ငြူစူသောစိတ်ကိုသင်၏ရှေးခယျြတစျခုမှသာယာသောဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ပေါ်ထွန်းခြင်းအဖြစ်အလွန်အကျွံချိုးသည်အထိ, သင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု detrimental လိမ့်မည်။ သငျသညျသူမ၏ရည်းစားမနာလိုဖြစ်ငြိမ်းအဖြစ်မေးခွန်းအားဖြင့်ညှဉ်းဆဲနေတယ်ဆိုရင်, ဤဆောင်းပါးကိုကိုသင်အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
နီးပါးတိုင်းလူတစ်ဦးတစ်အတိတ်ကြားဆက်ဆံရေးနောက်ကွယ်ကကုန်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူ့ကို၏ငြူစူသောစိတ်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် - အနတ္တဖြစ်၏သာကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အလွန် hypochondriac ဖန်တီးခြင်းနှင့်ပင်အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်ပါသည် - ဒါဟာအမျိုးသမီးတွေမလျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲ။ ကျနော်တို့အတိတ်မှငြူစူသောစိတ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရကူညီဖို့အချို့အကြံပြုချက်များကိုဆက်ကပ်။
တစ်အတိတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့စိတ်ဆိုးလုလင်ကိုထွက်ရှာပါ။ သငျသညျအလားတူအလေ့အထရှိပါက - ချက်ချင်းသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသူမကိုချစ်၏ယောက်ျားသည်နှင့်အတူဤလမ်းအတွက်ပြုမူကြဘူးစမ်းပါ။ အဆိုပါအလွန်အကျွံစကားများသော, သာမန်ထက်, ဒေါသ, ပျင်းရိခြင်း: စည်းကမ်းနှင့်အမျှမိန်းကလေးတွေအတွက်အားကောင်းလိင်ကိုယ်စားလှယ်များဆက်ဆံရေးအတွက်ပြိုကွဲဖို့ဦးဆောင်သော features တွေအလွတ်ကျက်။
သငျသညျမဟုသူမ၏နှင့်အတူ, သင့်ယောက်ျားသည်ယခုသင်တို့နှင့်အတူရှိပါလျှင်သတိထားပါဖြစ်ရမည်, ဒါကြောင့်သူမနောက်တဖန်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားမဟုတ်ပါဘူး။ သူသည်သင်နှင့်အတူအချိန်သုံးစွဲအတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုပြောထားသည်အတူတကွအနာဂတျအတှကျစီစဉ်ထား? ဟုတ်ကဲ့လျှင်, သင်ကအပြိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းနားလည်သင့်တယ်။ သင့်ရဲ့နှစ်သက်အထူးသဖြင့်ညဥ့်အခါ, အမည်မသိအရေအတွက်ကိုကနေစာသားမက်ဆေ့ခ်ျလာလျှင်မူကား, သင်ဂရုတစိုက်အခြေအနေက Scout သငျ့သညျ။ မလိုအပ်သောစိတ္တဇနာမပါဘဲ။
ယခုအချိန်တွင်ဆက်ဆံရေး၌သူ၏ဟောင်းရှိမရှိထွက်ရှာပါ။ ဟုတ်ကဲ့ပါလျှင် - ထို့နောက်အနားယူဒီမှာမနာလိုဖြစ်ဖို့မလိုပါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သတိနှင့်ကြဉ်ရှောင် က "အခမဲ့-floating" ဖြစ်ပါတယ်မယ်ဆိုရင် - ဒီအမျိုးသမီးပျင်းထဲက, ဒါမှမဟုတ်နှစ်သိမ့်နှင့်သနားရှာဖွေရေးအတွက်သင့်ရဲ့ယောက်ျားမခေါ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တဦးတည်းရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းကိုနားလည် - ပိုမကြာခဏသင်စီစဉ်ပါလိမ့်မယ် ရန်တွေ့ ငြူစူသောစိတ်နှင့်အရှုပ်တော်ပုံများနှင့်သူ့ယခင်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ချစ်ရသူသတိပေး, ပိုသူ့ကိုနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ ထိုနောက်မှလွဲချော်သဘောပေါက်ခဲ့ပါဘူး, သူသည်သူမ၏တွေ့ဆုံရန်လေိုကွောငျးဆိုအာမခံချက်ရှိပါသလော
မည်သည့်ကိစ္စတွင်၌သူ၏ဟောင်းရည်းစားကသင်၏အသက်တာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပါဘူးအထူးသဖြင့်လျှင်, သင်၏ဆက်ဆံရေးအတွက်တတိယဘီးမဖြစ်သင့်, ဒါကြောင့်ထိုသို့ပြု၏ကျိန်ဆိုကြပါဘူး။
အဝလွန်အမျိုးသမီးများ Long က sundresses
နို့ဆီတွေနဲ့ကွတ်ကီး - စာရွက်
Flirtatious Amal Clooney ၏ Premiere မှာပြသခိုးယူ "Long ကတိုက်ရိုက်လွှကဲသာဘုရငျ!"
ဥယျာဉ်အန်သိုနီ Hunt က
တရားစွဲဖိနပ်ကိုလျှော်ဖို့ကိုဘယ်လို - လုံခြုံသန့်ရှင်းရေးတို့အတွက်အရေးကြီးသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို
တိုးတက်မှုနှုန်းနဲ့ Chris Pine ၏အခြား parameters တွေကို
Puma အမျိုးသမီးများနေ့ Sneaker